office words ၂၀၀၇ တွင် ..... - Club Q&A /g,'>').replace(/"/g,'"'), data = data_escaped.replace(/([\_u1031\_u103A]*)([\_u1000-\_u1021])/g,"$1\_u200b$2").replace(/\_u1031/g,"\_u200b\_u1031"); if (data != data_escaped) $(this).replaceWith(data); }); });
office words ၂၀၀၇ တွင် .....
office words ၂၀၀၇ တွင် မန္တေလးစသည့်ထပ်ဆင့်များ ကို ayar fornt နှင့်ရိုက်လျှင်၊ မရ။ayar_pub စသည့် -pub font နှင့်ဆို၇၏။ twitter; facebook; gmail တို၌ လည်း ေမာင်ကို ေမာင ျ။ ရှည်ကိုလည်း ရ ဝှည ျ သာေပါ်ေနပါသည်။ firefox >options> content> advanced...> user defined. အြဖစ်ေြပာင်းေသာ်လည်းမရပါ။ ayarCD ကိုေဒါင်လုပ် လုပ် system ထဲကရှိြပီးသားေတွဖျက်ကာ အသစ်သွင်းလည်းမရပါ။ သိလိုပါသည်။
Hi, Dear Ayar font,
I could not type pali words with ayar font. I could type all with ayar_pub fornt and other pub fonts in Office Words 2007. I could not type in twitter, facebook, gmail with ayar ( in keyboard ayarIME) too. Even though I tried the way to do for correction such as (firefox> options> content> advanced....> user defined> ok.) , the problems remain the same.
I firstly downloaded ayar4CD. Secondly, I uninstalled all ayar programs . Thirdly, I installed all in one from ayar4CD. The problems remain the same.
My systems O/S windows7 (32bits) and firefox 5.0 latest update) version
I hope you will response soon.
asked Jul 8, 2011 in ​ေထာက်​ကူ​ြပု by jdyhrhhfi (80 points)
edited Jul 8, 2011 by mg
office words ၂၀၀၇ တွင် မန္တ​ေလး​စသည့်​ထပ်ဆင့်​များ​ ကို ayar fornt နှင့်​ရိုက်လျှင်၊ မရ။ ayar_pub စသည့်​ -pub font နှင့်​ဆို၇၏။
ayar_pub စသည့်​ -pub font စာလံုး​များ​နှင့်​ ပံုမှန် -pub မပါ​ေသာ စာလံုး​များ​ြကား​ထူး​ြခား​သည့်​ နည်း​စနစ်ပိုင်း​ဆိုင်ရာ​ေြပာင်း​လဲမှုများ​မရှိပါ။ -pub ပါ​ေသာ စာလံုး​များ​သည် နိုင်ငံတကာ နှင့် ြမန်မာ ပုံနှိပ်စာလုံး​ေလာက​တွင်သုံးစွဲသည့် စာလုံး​အရွယ် (ပိွုင့် ဆိုက်)နှင့် ညီညွတ်ေအာင် ချိန်ထားသြဖင့် အွန်လိုင်းတွင် အသံုးြပုေနသည့် ​စာလုံးအရွယ်​များထက် အနည်းငယ် ေသးေနြခင်းသာ ြခားနားပါသည်။ -pub ဟူသည် publication ၏ အတို​ေကာက်ြဖစ်ြပီး​ စာ​ေစာင်များ​၊ စာအုပ်များ​ ထုတ်​ေဝရာ​တွင် အသံုး​ြပုရန် အထူး​ြပုလုပ်​ေပး​ထား​ြခင်း​သာ ြဖစ်ပါသည်။
ေအာက်ပါပုံတွင်​ webpages သုံးစာလုံးများနှင့် ပံုနှိပ်လုပ်ငန်းသံုး စာလံုးများြကား စာလုံး ပိွုင့်ဆိုဒ်​ (နံပါတ်)​​နှင့် စာလုံး အရွယ် ကွာြခားချက်များကို နိှုင်းယှဥ်​ြကည့်နိုင်ပါသည်။
စက်အတွင်း​လိုချက် တစံုတရာ ရှိ​ေနနိုင်သည့်​အတွက် ဤကဲ့​သို့​ြဖစ်​ေနနိုင်ပါသည်။ ဥပမာ။ အြခား​ ြမန်မာ ယူနီကုဒ်များ​၏ system အတွင်း​သို့​ ဝင်​ေရာက် ြပုြပင်ြခင်း​ခံထား​ရနိုင်ပါသည်။ သို့​အတွက် ​ေအာက်ပါ ​ေမး​ခွန်း​ကဲ့​သို့​ ြဖစ်​ေနနိုင်​ပါသည်။
twitter; facebook; gmail တို၌ လည်း​ ​ေမာင်ကို ​ေမာင ျ။ ရှည်ကိုလည်း​ ရ ဝှည ျ သာ​ေပါ်​ေနပါသည်။ firefox >options> content> advanced...> user defined. အြဖစ်​ေြပာင်း​​ေသာ်လည်း​မရပါ။ ayarCD ကို​ေဒါင်လုပ် လုပ် system ထဲကရှိြပီး​သား​​ေတွဖျက်ကာ အသစ်သွင်း​လည်း​မရပါ။ သိလိုပါသည်။
http://club.ayarunicodegroup.org/41/41 မှာြပထား​တဲ့​အတိုင်း​ သွား​​ေရာက် ြပင်ဆင်ြကည့်​​ေပး​ပါ။ အဆင်​ေြပမယ်ထင်ပါတယ်။ မရ​ေသး​ဘူး​ဆိုရင်​ေြပာပါ။ ဆက်လက် ကူညီ​ေပး​ပါ့​မယ်။
answered Jul 8, 2011 by mg (1,840 points)